Caravan & Toeram-piompiana ala - IntoKildare
Miasa amin'i Mary sy Michael McManus, Forest Farm dia manolotra karazana trano hipetrahana. Caravan sy Camping Park efa niasa tanteraka no hita eo amin'ity toeram-pambolen'ny fianakaviana mahafinaritra ity.
Any amin'ny 5km miala ny tanàna lova misy an'i Athy, Forest Farm no toerana fitsangatsanganana tsara hijerena ny County Kildare. Anisan'izany ny kojakoja misy fandroana mafana, fantsona mafy, fidiovana, vata fampangatsiahana, lakozin'ny camper ary herinaratra 13A. Ny toeram-piompiana miasa dia manana hazo Beech sy Evergreen matotra mahafinaritra.
Lakozia kely, Camping Kildare, Budget, Sariaka amin'ny biby, Mpinamana, 3 Star, Athy
Lalan'i Dublin, Athy, County Kildare, Irlandy.